सञ्चार मन्त्रालयलाई दीपकराज गिरीको सुझाव- चलचित्र विकास बोर्ड विघटन गरे के हुन्छ?
सञ्चार मन्त्रालयलाई दीपकराज गिरीको सुझाव- चलचित्र विकास बोर्ड विघटन गरे के हुन्छ? 'बलिउडका कारण छायामा नेपाली फिल्म'
नेपाल लाइभ शनिबार, भदौ १४, २०७६, १२:१९
नेपाली फिल्म हलहरूमा किन कम समय टिक्छन्? जवाफमा आउन सक्लान्– फिल्म स्तरीय बन्दैनन्। हलसम्म दर्शकलाई तान्ने क्षमता नेपाली फिल्मले राख्दैनन्।
यद्यपि, राम्रै लगानी र मेहेनतमा फिल्म बनाए पनि अपेक्षा अनुरुपको व्यापार नहुनु कलाकारहरूको चिन्ताको विषय बनेको छ। राम्रा भनिएका फिल्महरू पनि लामो समय नचल्नुका कारण बलिउड फिल्मको ‘दबदबा’ रहेको कलाकारहरू बताउँछन्।
शनिबार बिहान दीपकराज गिरीले एक स्टाटस लेखे। स्टाटसमा उनले ‘चलचित्र विकास बोर्ड विघटन गरे हुन्छ’ भन्दै सञ्चार मन्त्रालयलाई सुझाव दिए।
उनको स्टास थियो– चलचित्र विकास बोर्ड विघठन गरे हुन्छ कि? सरकारको विद्यमान नीति अनुसार हामीले २ करोड लगानी गरेर नेपाली भाषाको फिल्म बनाउनुको कुनै अर्थ छैन। नेपाली फिल्म खास चल्दा पनि चल्दैन। राम्रो नि हुँदैन। त्यही २ करोड त शाहरुख खान, सलमानको फिल्म लगायत एक से एक विदेशी फिल्महरू आउँछ। ती फिल्महरू किनेर ल्याउने चलाउने, नेपाली फल्मभन्दा सुरक्षितल पनि अिन्दी फिल्म। राज्यले रातारात सेन्सर गराइदिइहाल्छ, सुविधा दिन्छ, हलहरूले पनि विशेष स्थान दिन्छन्, किन टाउको दुाखउने बेकारमा?
सबै मिलेर नेपाली फिल्म नबनाऔं विदेशी फिल्म किनेर चलाऔं। भाषा, संस्कृति भाडमा जाओस्।, व्यापार मुख्य कुरा हो नि। त्यसपछि विकासबोर्ड पनि राज्यको खर्च पनि कम हुन्छ। करै उठाउने काम त कर कार्यालयले गरिहाल्छ नि होइन र?’
विदेशी फिल्मका कारण नेपाली फिल्म छायाको परेको दीपकको गुनासो छ। राज्यले नै नेपाली फिल्मलाई विभेद गरेको उनको मत छ।
दीपकराजकै स्टाटस सेयर गर्दै अर्का कलाकार केदार घिमिरे ‘माग्ने बुढा’ले लेखे–मैले यही कुरा गर्दा मलाई सलमान खान विरोधी भनेर अतिरञ्जित गरियो। दीपक दादा पनि यही लाइनमा आइस्यो।
दीपककै स्टाटसमा कमेन्ट गर्दै निर्देशक प्रदीप भट्टराईले ‘राज्यले कला संस्कृति जोगाउने कुरामा सोच्दैन भने नेपाली फिल्म बनाउनुको औचित्य छैन' भन्दै मत राखे।
नेपाली हल तथा वितरकहरूले हिन्दी फिल्मलाई प्राथमिकता दिएर नेपाली फिल्मलाई बेवास्ता गरेको कलाकारहरूको ठम्याइ छ।
हिन्दी र नेपाली फिल्मलाई नेपाली हलमा एउटै स्थान दिनु नहुने पक्षमा दीपक छन्।
दीपककै फिल्म ‘छ माया छपक्कै’को रिलिज मिति पनि हिन्दी फिल्मका कारण पर सर्‍यो। भदौ २७ गते रिलिज हुने भनेको उक्त फिल्म ऋतिक रोशनको ‘वार’सँग भिड्ने भएपछि झण्डै एक महिनापछाडि सारेर असोज २४ गते रिलिज मिति तोकियो।
अघिल्लो फिल्मले राम्रै कमाइ गरे पनि बलिउड फिल्मका कारण आउँदो फिल्म छायामा पर्नसक्ने चिन्ता दीपकमा छ।
हालै रिलिज भएका नेपाली फिल्म 'मारुनी' पनि बलिउड 'साहो'सँग भिडिरहेको छ।